Kanye eqanjiwe emashalofini incwadi emashalofini ukuza imisebenzi kwezinye izindawo. incwadi Unjalo "Isifundo China". Colin Campbell, umlobi, aphethwe isifundo omkhulu izinhlobo ezithile zokudla, sebenzelani ukwakha ubuhlobo abanezifo bona kungabangela. Yini baphuma ke, zama ukuqonda.
Lokhu yezokwelapha ucwaningo vylivsheesya kamuva emisetjenzaneni yokuzijamela, ubizwa kufanele ngokuthi ukuhlolwa engakaze ibonwe. Yaqala ngo-1983, futhi ingxenye yabo ke waqinisekisa China, yiMelika kanye ne-England. Iminyaka engaphezu kwamashumi amabili, uyaqhubeka ukucinga impendulo yombuzo kanjani imikhiqizo okuvela ezilwaneni zihlobene nezifo ezahlukene ezithinta ingxenye enkulu yesintu. "I-China Isifundo" (Colin Campbell, uprofesa oyisazi samakhemikhali ezinto eziphilayo, wawubhala ngokubambisana usosayensi-indodana Thomas) yakhishwa ngo-2004. Ngu 2011 amakhophi kwegazi ithengiswe kudlulwe 500,000. Lokhu kwabeka incwadi ohlwini bestseller.
Izisekelo ezicatshangelwayo cwaningo
Kuye olususelwa kwezibalo idatha Izifunda Republic of China. Izakhamuzi lezi zindawo ngokuningiliziwe ukutshelwa izintandokazi zabo ukudla, futhi ngemva kokubonga igazi oyisazi samakhemikhali ezinto eziphilayo nolunye uvivinyo ezidingekayo. Njengoba isifo eziyimbangela, okuyinto lihlotshaniswa kucatshangwa ososayensi, umdlavuza kuyakhethwa. Sekukonke, lolu cwaningo abathintekayo abantu kuka 6.500, futhi imiphumela yayo eziye zatholakala 8000 izixhumanisi phakathi isifo kanye nokudla izinto.
"I-China Isifundo" (Colin Campbell wahlala labahluleli futhi ngungqondongqondo main ngemuva kulo ukuhlola) imemezele imiphumela zokuhlolwa abafundi. Bonke bavunyelwa nguhulumende. Ngaphezu kwalokho, isazi sesayensi nethimba lakhe kwadingeka 74 isibonelelo ikuvumela ukuba bahlanganyele ocwaningweni lwezesayense. Ngo-laboratory amagundane njengoba zokuhlola zazinayo nge aflatoxin umdlavuza. Ukudla kwawo ngezindlela ezingafani, amaprotheni wayekhona. Ithathwe ndawonye, lokhu kuye kwaholela ekwakhekeni izimila anomdlavuza, okuyinto uyaphinda uqinisekisa ukuthi kukhona ukuhlobana phakathi isifo kanye nokudla. Ososayensi baye bathola ukuthi indlela ukubambezela ngisho ukusheshisa ukuthuthukiswa izimila.
Esikudlayo lokho akuyona
Ngemva kweminyaka eminingana yocwaningo eyenziwa ngqo, kwathatha isikhashana ukuba silungise ukuhlolwa ephepheni nokulungisa Imiphumela ezibhalelwe. UJesu uzakuhlala njengobana ncwadi ukuze ishicilelwe futhi sasixoxa ngakho yena Campbell. "I-China Isifundo" kuphephile ukuphetha ngokuthi abantu ungasebenzisi imikhiqizo isilwane (okufana nabizelwa cishe zonke izinhlobo inyama, amaqanda, ubisi noshizi, kanye carbohydrate elicwengisiswe), mancane amathuba okuthi ukuthuthukisa nezifo ezingamahlala khona. Okunye okungenziwa ukuze ungeze futhi diversify wokudla ukusetshenziswa, okusabhontshisi, izithelo, amakhambi nemifino. Esinye isimo ukusetshenziswa ephephile wale mikhiqizo isibe ukucubungula kwabo. izithako herbal babe inqwaba imvelo kwamakhemikhali yezingxenye iyakhona iqhaza ukusabela ezidingekile umzimba womuntu.
Lutho neze ncwadi iyaqhubeka ukudayiswa, ngaso nakanjani alindele Izibuyekezo abafundi '. Iyathinteka nesithi "China Isifundo": A critique of umsebenzi yesayensi yezokwelapha kwaba ukuqinisekisa ukuthi umlobi wayo wanxusa ukungayidli inyama ngezizathu ukuthi kusolakala ukuthi kuyinto kulethe ezinkulu sokuthuthukiswa izifo. Abanye babona ke njengoba ukubandlulula esekelwe ukunambitheka izintandokazi, lapho Campbell waphendula ngokuthi akazange bagcizelele ukuthi abafundi bezincwadi zakhe ukuba babe inyama, kodwa kuphela inikeza kubo ngaphandle kusukela ekudleni ukudla okuthile futhi ufaneleke lokhu kukhetha ngohlangothi yesayensi ezingokoqobo. Ngo-2010, uBill Clinton adunyiswe incwadi. Ukulandela ukuhlinzwa kwenhliziyo wayekade abalandela iseluleko abalobi bayo, adikile imikhiqizo yobisi ukugxila imifino.
"I-China Isifundo" (Colin Campbell): incwadi Izibuyekezo
Ngesikhathi esifanayo umfundi jikelele, okuyiwona yomlobi yethulwa izincomo njengoba cishe ezinengqondo, umkhiqizo ukugxekwa okulindeleke ososayensi nabo. isiphetho olunzulu Ochwepheshe emikhakheni ehlukahlukene kwaholela ekutheni izikhulu zibonise ukukhala umphakathi, esibatshela mpikiswano kakhulu futhi ingxoxo mayelana ubuqiniso ucwaningo okufakiwe.
Ngakho, umlobi wathola amaphutha methodological. Akazange cabanga umehluko ezingeni lokuzivivinya test, geography kanye sezulu. A ahlukene ingxenye silingo okusekelwe ebufakazini zesayensi, futhi ngokuyinhloko kokuma kanye nokutholakele siqu Campbell, nakuba waqinisekisa egunjini lokucwaninga esibhedlela. Kafushane, ukuze siphetfo lesicacile lokho kwakunganele. Imiphumela esekelwe esiyimbangela isixhumanisi ukusetshenziswa kwemikhiqizo yezilwane isifo, akufanele kubhekwe njengento engeyona imihlahlandlela nemibono ezidinga wafaka isisekelo ikusasa ucwaningo oluningi.
Ukudla okunomsoco - ukhetho best
Colin Campbell okhokhela eziningi ukunakekela imifino njengoba isibonelo ukudla okunempilo futhi efanele, kodwa abathandanga ukudalula ngokuphelele izindaba Ukudla Kunconywa, eyayinesihloko inyama njengoba esincintisana eyinhloko izingxenye zemifino. On indima inyama ekudleni womuntu cishe alisho lutho, "Chinese Izifundo". Abagxeki ngempela esiqinile: uma usheshe ugxila imifino, kanjani ukuba ezisansimbi ezinamandla wamakhemikhali nezibulala-zinambuzane ukuthi uthole emizimbeni yethu ngokudla? Ukukhohlwa ukubaluleka nokudla okunomsoco, Campbell sihamba izinkinga ukudla ongenakulinganisela ukuthi ngaphandle inyama. Phakathi lezi zinkinga, izazi zokudla ebizwa yokuntuleka amaprotheni, ama-amino acid adingekayo umzimba, i-zinc namaqembu ahlukahlukene amavithamini.
incwadi Abstract uthembisa revolution zengqondo ezimisweni umsoco ofanele. Kodwa kwenzekani umkhuba? Ngokusho abafundi, ungabe usaba khona amaqiniso angenhla welulele indaba - lawa yokuntula main, lapho ukwakha "Isifundo China". Colin Campbell konke okusemandleni igcwalisa ukubaluleka komsebenzi wakhe, bedumisa umsebenzi, ezithembisa umnikelo embonweni ukudla okunempilo.
Kodwa iqiniso abafundi futhi abazi. Kunalokho - intilibathwa imininingwane izakhiwo imikhiqizo, esevele ezaziwayo. Encwadini lifihlakele ngokwanele futhi ngezinye izikhathi akusekelwe ebufakazini, Campbell likhuluma ngezinsizwa nezintombi umonakalo owenziwe amaprotheni isilwane. Okubaluleke kakhulu unamathele ukudla okusheshayo okusabalele ezweni lethu.
Ngakho, incwadi ethi "The China Isifundo" engalethi noma yini entsha. Imfundiso yokuziphendukela isifundo ithakazelisa kakhulu futhi izihloko ezihlobene ngangokunokwenzeka sinwebiswe incwadi format. Futhi eqinisweni kwakunokwenzeka ukwenza isihloko lesayensi.
Funda "Ucwaningo" futhi nalabo abangamkhonzi, woza esiphethweni esisodwa: uma ufuna unakekele impilo yakho, ungahlukumezi imikhiqizo yezilwane, futhi ugxile lezo anamavithamini yemvelo kanye nezakhi.